EzoKhenketho kunye noLonwabo kwiMida yokuXhaswa kweMali ewela umda weBorder iyonke i-1.5 yezigidigidi zeedola kwi-Q2 2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » EzoKhenketho kunye noLonwabo kwiMida yokuXhaswa kweMali ewela umda weBorder iyonke i-1.5 yezigidigidi zeedola kwi-Q2 2021
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Xa kuthelekiswa ixabiso leentengiselwano zemida enqamlezileyo kwimimandla eyahlukeneyo yomhlaba, iYurophu ibibambe indawo ephezulu, nezibhengezo zizonke ezixabisa i-1 yezigidi zeerandi ngelo xesha.
I-650 yezigidi zeedola zokuxhasa ngemali i-FlixMobility ibeka phambili uluhlu.
IJamani ibeke phambili kuluhlu ngokwexabiso lesivumelwano kwi-745.23 yezigidi zeedola.
Elona lizwe liphezulu ngokubhekisele kwimisebenzi yokuxhasa ngezemali kwi-Q2 2021 yayiyiFrance.
Iyonke ukhenketho kunye nomzi mveliso wokuzonwabisa onqamleze umda kwimali yokuthenga imali exabisa i-1.5bn yeedola yabhengezwa kwihlabathi liphela kwi-Q2 2021, ikhokelwa yi- $ 650m yezemali yokuxhasa ngemali Ukuhamba kweFlix.
Ixabiso liphawule ukwanda kweepesenti ezingama-421.4 ngaphezulu kwekota edlulileyo kunye nokunyuka kwama-509.4% xa kuthelekiswa nomndilili wekota yokugqibela, owawumi kuma- $ 242.88m.
Xa kuthelekiswa ixabiso leentengiselwano zemida enqamlezileyo kwimimandla eyahlukeneyo yomhlaba, iYurophu yabamba indawo ephezulu, kunye nezibhengezo zizonke ezixabisa i-1 yeebhiliyoni zeedola ngelo xesha. Kwinqanaba lelizwe, iJamani igqogqe kuluhlu ngokwexabiso lesivumelwano kwi- $ 745.23m.
Ngokwamanani, iYurophu ivele njengommandla ophezulu wokhenketho kunye nomzi mveliso wokuzonwabisa onqamlezayo kwimicimbi yezemali kwilizwe liphela, ilandelwa yiAsia-Pacific kunye noMntla Merika.
Elona lizwe liphezulu ngokwemisebenzi yokuwela imali kwimida yokuwela eQ2 2021 yayiyiFransi ngezivumelwano ezintathu, ilandelwa yiJamani ngamathathu kunye neIndiya ngamathathu.
Kwi-2021, ekugqibeleni, isivumelwano semali yokuwela imali esixabisa i-1.5bn sabhengezwa kwihlabathi liphela kukhenketho kunye nomzi mveliso wokuzonwabisa, kuphawula ukwehla kwe-243.1% ngonyaka.